အပိုဆု Unibet ပြင်သစ် : 100 ယူနိုက်တက်.frတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခမဲ့လောင်းကြေးယူရိုသည်
Unibet.fr သည်ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးသည့်ပထမဆုံးအားကစားလောင်းကစားဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် 1997 နှင့်အစပိုင်းတွင်အလောင်းအစား M ကခေါ်သည်. ကောက် 2005 အခါ Unibet ၏နာမ. ဒီ site ကတည်းကပြင်သစ်စျေးကွက်အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည် 2011 လောင်းကစား Eurosport သို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်. unibet Group Plc သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကစားသူသန်းပေါင်းများစွာရှိပြီးစတော့ဟုမ်းစတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်သည်. ဒီတော့, ၎င်းသည်နာမည်ကောင်းရသည့်ဘတ်ဂျက်နှင့် PMU ကဲ့သို့သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်အနည်းငယ်ကိုသာကြော်ငြာခြင်းကြားမှအလွန်ခိုင်မာသောလောင်းကစားဆိုဒ်ဖြစ်သည်. ပြင်သစ် Unibet ဖဲချပ်ဝေကမ်းလှမ်းမှု, အပိုဆုကြေးနှင့်လောင်းကစားခြင်းအတွက်မြက်များစွာရှိသည် 100 ယူရို. Unibet အားကစားနည်းများကဲ့သို့နည်းတူသင်၏ပထမဆုံးလောင်းကြေးကိုငွေပြန်အမ်းမည် 100 သူရှုံးလျှင်€. နောက်ထပ်ဖိုင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖိုင်ကိုကြည့်ရှုပါ
Unibet ကိုဇန်နဝါရီလတွင်ပြင်သစ်၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 2012, Eurosportbet ရွေးနှုတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီး ARJEL အားကစားလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဖဲချပ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်. Unibet.fr ၏အဆုံးပေါ်ပေါက်လာမှုသည်ဤ ဦး ဆောင်သောအွန်လိုင်းလောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမထိခိုက်ပါ, အရာသည်ပြင်သစ်တွင်အလွန်ကောင်းသောအမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်ကိုနှစ်သက်သည်, အားကစားသတင်းထောက် Pierre Ménèsနှင့် လက်တွဲ၍ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.
ပို။ ပြင်သစ် site ၏အင်္ဂါရပ်များ, အလောင်းအစားမီနူးနှင့်လောင်းကစားစာရင်းကိုဝင်ရောက်ခြင်းသည်အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းတွင်တွေ့ရသောအရာထက် ပို၍ အဆင်ပြေသည်. ပါရီသည်မိုဘိုင်းဆိုက်နှင့်မိုဘိုင်းလောင်းကစားခြင်းအတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလက်တွေ့ကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်.
ပြင်သစ် Unibet : သင်၏အားကစားလောင်းကစားခြင်းအတွက်အားကစားများစွာ
Unibet သည်ကျယ်ပြန့်သောအားကစားအမျိုးအစားများကို Bwin France တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ, သို့သော်ထိုထက်မက 15 အဆိုပြုထားစည်းကမ်းများ. ကျနော်တို့ဂန္ Unibet.fr ဘောလုံးသို့ပြန်သွား၏, တောင်း - ဘောလုံး, တင်းနစ်နှင့်ရပ်ဘီ, ဒါပေမယ့်သင်လည်းလက်ဝှေ့ထိုးခြင်းသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုကစားနိုင်သည်. http တွင်ရရှိနိုင်သည့်အားကစားများအားလုံးကိုရှာပါ://www.unibet.fr/sport.
အွန်လိုင်းလောင်းကစားဝိုင်းအများစု၌ရှိသကဲ့သို့, အစည်းအဝေးတစ်ခုစီ၏ခြားနားချက်ကိုသင်အလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်သည်: တစ် ဦး ဂန္အောင်ပွဲ / ကစားပွဲတွင်ပထမဆုံးကဒ်ကိုမည်သူလက်ခံမည်နည်းစသောထူးကဲသောအလောင်းအစားများဖြင့်လောင်းကစားသည်. »ထို့အပြင်, ပြင်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုသည်ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သက်ဆိုင်သည့်သက်တမ်းအရင့်ကျက်မှု. အပတ်တိုင်း, သင်သည်နာမည်အကြီးဆုံးဘောလုံးပွဲများတွင်တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်သည်, တင်းနစ်, ရပ်ဂ်ဘီသို့မဟုတ်ဘတ်စကက်ဘော.
ပဲရစ်တွင်ထင်ရှားသောအားကစားလောင်းကစားများရှိသည် (ဒါပေမယ့်မြက်နှင့်ဖဲချပ်ကိုလည်း). အားကစားအားလုံးနီးပါးကိုကမ်းလှမ်းသည်. ယေဘုယျအား, ပိုပြီးလွှမ်းခြုံကမ်းလှမ်း 30 Unibet သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပေးပြီးလူကြိုက်အများဆုံး Liga ပြိုင်ပွဲများကိုခန့်မှန်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်, အဖွဲ့ချုပ် 1 ချန်ပီယံလိဂ်, ယူရိုပါလိဂ်, အနိမ့်လောင်းကြေးနှင့်အတူအစည်းအဝေးများအဖြစ်.
သို့သော်လေ့ကျင့်ခန်း၏ပမာဏထက်ကျော်လွန်သည်, ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဂိမ်းတစ်ခုအတွက်အလောင်းအစားများဖြစ်သည်. ဂန္နှင့်လူကြိုက်အများဆုံးအကြားပဲရစ်, သငျသညျရှေးခယျြမှုအတွက်လုယူလိမ့်မယ်.
ဖြစ်နိုင်ရင်, ဤအလောင်းအစား၏အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်လောင်းကစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Multiplex ကိုပေးလိမ့်မည် (တိုက်ရိုက်လောင်းကစားခြင်း). ဒီတော့, ကစားပွဲမျိုးစုံတွင်ကစားခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်.
ဆုံ, စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေးတယ်, သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းပြိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်လဲလေ့ရှိပါတယ်. သို့သော်, ငါတို့အရမ်းအဆင့်အတန်းရတယ်, အထူးသဖြင့်ဘောလုံး. အလွန်ထိရောက်သောအမှတ်အသားဖြင့်လောင်းကစားခြင်းအတွက်ရမှတ်. ထို့အပြင်, အလောင်းအစားကို၎င်း၏ကမ်းလှမ်းမှုအားဖြင့်ခွဲခြားသည်.
€ 100 အပိုဆုကြေး
ဒီမြှင့်တင်ရေးဖြစ်ပါတယ်, သေချာတယ်, ထောင်ချောက်အနည်းငယ်. အဆိုပါ site ကိုမှတက်ပေးထားပါတယ် 100 ပထမဆုံးလောင်းကြေးအတွက်အခမဲ့လောင်းသည်, အနိုင်ရသို့မဟုတ်ရှုံး.
မကောင်းတဲ့ဟောကိန်းကိုပြန်ပေးရုံသာမကဆုကြေးငွေရရှိတာကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့် virtual ပိုက်ဆံအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်. ဒါကသွားပုံပါပဲ:
အခမဲ့အလောင်းအစားပုံစံဖြင့်သင်အကြွေးရရှိမည် 50% သင့်ရဲ့ပထမဆုံးသိုက်၏, ထို့နောက်သင်၏ကစားသမားအကောင့်ပြီးနောက်ကြွင်းသောအရာ.
သေဆုံးသူအခမဲ့နံပါတ်ပဲရစ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလို့မရပါ. ဒါဟာကစားနှင့်အသားတင်အမြတ်ရပါမည် (သက်ဆိုင်လျှင်) သင်၏စစ်မှန်သောငွေစာရင်းသို့အသိအမှတ်ပြုခံရလိမ့်မည်. ဒီအကြွေးကိုသုံးပြီးစဉ်းစားရမယ်, ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကအဘယ်သူမျှမသက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲရှိသေး၏.
ထို့အပြင်, ပြင်သစ်ဖောက်သည်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အဖွဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှပုံမှန်အသုံးပြုသောဤမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များသည်, အရာသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်အလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်းအတွက်အလောင်းအစားများကိုလူသိများသည်.
Previous Previous post: PMU အပိုဆုကြေး
Next Next post: Unibet အပိုဆု